February 1, 2020 wardeeq news
Suuqa kala iibsiga ee bisha Janaayo ayaa si lama filaan ah u xirmay xalay saqdii dhexe, iyadoo kooxaha ugu waa weyn Premier League ay saxiixyo sameeyeen xilli kuwa kalena ay ka fasaxeen Kooxahooda.
Waxa aynu idin soo gudbin doonaa xiddigaha k usoo biiray ama ka baxay kooxaha ugu waa weyn ee Premier League, waxaa jira kooxo aan sameynin saxiixyo lagu qanci karo ama ay ku farxi karaan taageerayaashooda.
Halkaan ka aqriso xiddigaha ku soo biiray ama ka baxay Kooxaha waa weyn ee Premier League:-
Xiddigaha ku soo biiray Arsenal: Pablo Mari (Flamengo, amaah), Cedric Soares (Southampton, amaah)
Xiddigaha ka baxay Arsenal: Emile Smith Rowe (Huddersfield, amaah), Tyreece John-Jules (Lincoln, amaah), James Olayinka (Northampton, amaah), Ben Sheaf (Doncaster, amaah), Konstantinos Mavropanos (Nurnberg, amaah), Deyan Iliev (Jagiellonia Bialystok , amaah).
Xiddigaha ku soo biiray Liverpool: Takumi Minamino (RB Salzburg, 7.25 milyan oo gini), Joe Hardy (Brentford, aan wali la shaacin qiimihiisa).
Xiddigaha ka baxay Liverpool: Herbie Kane (Hull, Amaah), Rhian Brewster (Swansea, Amaah), Allan Rodrigues De Souza (Atletico Mineiro, aan wali la shaacin), Nathaniel Phillips (Stuttgart, amaah), Isaac Christie-Davies (Cercle Brugge, amaah).
Xiddigaha ku soo biiray Man Utd: Bruno Fernandes (Sporting Lisbon, heshiis aan si rasmi ah loo shaacin qiimihiisa), Nathan Bishop (Southend, aan la shaacin), Odion Ighalo (Shanghai Shenhua, amaah).
Xiddigaha ka baxay Man Utd: Ethan Hamilton (Bolton, amaah), Ashley Young (Inter Milan, 1.3 milyan oo gini), George Tanner (Salford, amaah), Cameron Borthwick-Jackson (Oldham, amaah), Marcos Rojo (Estudiantes, amaah)
Xiddigaha ku soo biiray Manchester City: Ma jiro wax xiddig ah oo ku soo biiray.
Xiddigaha ka baxay Manchester City: Patrick Roberts (Middlesbrough, amaah), Lukas Nmecha (Middlesbrough, amaah), Ian Poveda (Leeds, aan la shaacin), Angelino (RB Leipzig, amaah), Matt Smith (Charlton, amaah), Henri Ogunby (Burnley, oo aan la shaacin).
Xiddigaha ku soo biiray Chelsea: Ma jiro wax xiddig ah oo ku soo biiray.
Xidigaha ka baxay Chelsea: Danny Drinkwater (Aston Villa, amaah ), Marc Guehi (Swansea amaah), Conor Gallagher (Swansea, amaah), Jamal Blackman (Bristol Rovers, amaah), Victor Moses (Inter Milan, amaah), Tariq Lamptey (Brighton, qiime aan la shaacin).
Xiddigaha ku soo biiray Tottenham: Gedson Fernandes (Benfica, amaah), Giovani Lo Celso (Real Betis, 27.2 milyan oo gini), Steven Bergwijn (PSV Eindhoven, 25 milyan oo gini).
Xiddiga ka baxay Tottenham: Jack Clarke (QPR, amaah), Christian Eriksen (Inter Milan, 17 milyan oo gini), Kyle Walker-Peters (Southampton, amaah), Cameron Carter-Vickers (Luton, amaah), Danny Rose (Newcastle, amaah), TJ Eyoma (Lincoln, amaah), Anthony Georgiou (Bolton, amaah), Kazaiah Sterling (Leyton Orient, amaah), Paris Maghoma (Brentford, aan la shaacin), Shilow Tracey (Macclesfield, amaah), Tashan Oakley-Boothe (Stoke, qiime aan la shaacin).
Dhimasho Iyo Dhaawac Ka Dhashay Dagaal Ka Dhacay Duleedka Kismaayo
Al-Shabaab oo weeraray fariisin Ciidan iyo dowladda oo ka hadashay